ဒါကတော့ Snooker Game လေးပေါ့
တစ်ခါတစ်လေတော့ဒီဂိမ်းလေးဆော့ဖြစ်တယ်..Snooker ကစားတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေ..ဒေါင်းလိုက်ပါဦး Download Link : http://www.mediafire.com/?mzoiq2zj00u
Posted by Peace at 11:17 AM0comments Links to this post
Posted by Peace at 9:43 PM0comments Links to this post
USB ကိုpasswordပေးပြီး lockချတဲ့ Software
မိမိရဲ့ USBကိုသူများအလွယ်တကူဖွင့်လို့ မရအောင်passwordပေးပြီးမိမိရဲ့ ဖိုင်တွေကိုသိမ်းထားလို့ ရပါပြီခင်ဗျာ၊softwareလေးတခုကိုဒေါင်းပြီးလုပ်ရမှာပါ၊မိမိရဲ့ USBကို private zone နဲ့public Zone ဆိုပြီးခွဲလိုက်တာပါ၊ private zoneမှာမိမိရဲ့ အရေးကြီးဖိုင်တွေကိုထည့် ပြီး password နဲ့ ပိတ်ထားလိုက်ရုံပါပဲ၊ public zone ကတော့မည်သူမဆိုကြည့် လို့ ရပါတယ်၊ မိမိရဲ့ USB က1 GBရှိတယ်ဆိုပါစို့ ၊ private zone နဲ့public zone ကိုမိမိကြိုက်သလို formatချလို့ ရပါတယ်၊ ဥပမာ private zoneကို500mb formatချပြီးမိမိသိမ်းချင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုထည့် ထားလိုက်ပါ၊ပြီးရင်passwordပေးလိုက်ပါ၊ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ ဖိုင်တွေကိုမည်သူမှဝင်ကြည့် လို့ မရတော့ပါ၊ passwordသိတဲ့ မိမိတဦးတည်းသာဝင်လို့ ရပါတော့မယ်၊
အောက်ကလင့်လေးမှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးပြထားတဲ့ pdf ဖိုင်ရယ် software လေးကိုဒေါင်းပါ။
Posted by Peace at 9:23 PM0comments Links to this post
Skype,G-Talk,VZO,Yahoo Messager တို့သုံးရတာ ငြီးငွေ့ရောပေါ့နော်...
ဒီ ooVoo လေးသုံးကြည့်ပါဗျာ.ကောင်းပုံလေးကတော့ ကြိုက်သွားစေရမယ်
ဗွီဒီယိုချက်မလား မြန်မာလိုရေးမလား ဖိုင်တွေပို့မလား... တစ်ခုဒေါင်းထားလိုက်ရုံနဲ့ အားလုံး လုပ်လို့ရမယ်ဗျာ...မယုံရင်ဒေါင်းပြီးသုံးကြည့်လိုက်နော်.....
Posted by Peace at 9:12 PM0comments Links to this post
Password Breaker AIO
KOMYAT Password Breaker (2010) | 57MB
ကဲဟိုဖိုင်ဒေါင်းပြီးပါ့စ်ဝပ်ကြောင့်ဖွင့်မရလို့ ။ဒီဖိုင်ဒေါင်းပြီးပါ့စ်ဝပ်ပါနေလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေ
8)RAR File Password Cracker
Posted by Peace at 3:08 PM0comments Links to this post
History Killer Pro 5.0.3 Multilingual Portable
History Killer Pro 5.0.3 Multilingual Portable |2Mb
Posted by Peace at 3:06 PM0comments Links to this post
God On the Go: New American Bible, New Testament
God on the Go isaBible onaUSB flash drive!
That means that you can take Scripture with you wherever you go simply by plugging this device into your computer. Anyone who wants to keep Scripture close, but doesn't want to carryaheavy book everywhere, will love this handy little device.
* Perfect gift for students, teachers, ministers, and laity at home and work
* Includes footnotes and verse/subject index
* Interactive, bookmark your favorite passages
This version includes the complete New Testament of the New American Bible. Users can search the entire New Testament withatopic index, bookmark those passages with significant, personal meaning, and even go directly to the daily readings on the website for the United States Conference of Catholic Bishops.
Currently God on the Go is only compatible with MS Windows 2000, XP and Vista only. We expectaPC/Mac-compatible version in the summer of 2009.
What is God on the Go?
1. Your Typical USB Flash Drive: 90% of the capacity of this device is free space so you can also use it to carry other important files, songs and videos.
2. Your Bible: This device holds every book, chapter and verse you would find inaprint version of the Bible. The NAB edition even includes all the footnotes.
3. Your Daily Reading Bible: This device can take you directly to the daily readings on the USCCB website (internet connection required).
4. Your Faith Topic Study Aide: This device indexes the Bible based onawide array of topics important to many. It's your digital spiritual advisor.
5. Your Personalized Bible Flags and Tags: This device allows you to bookmark your favorite passages for quick reference anytime you use it.
6. Your 5-Gram Source for Spiritual Strength: Carry this with you anywhere and insert it into any computer USB port.
2. Being Green - No trees are cut down to produce God on the Go and all electronics used comply with European RoHS standards.
New American Bible, New Testament
Posted by Peace at 8:11 PM0comments Links to this post
Posted by Peace at 3:12 PM0comments Links to this post
WOT Add-Ons (Web Of Trust)
အင်တာနက်စာမျက်နှာများကို ၀င်ကြည့်တဲ့ အခါ မိမိတို့ ၀င်ကြည့်မည့်ဆိုက် အန္တရာယ်ရှိ/ မရှိ အရောင်နဲ့ သတိပေးတဲ့ Forefox အတွက် WOT Add-ons-လေးပါ။ မိမိသည်ကို လာတဲ့ အီးမေးလ်၊ ဂူဂဲမှာ စာရှာတဲ့အခါ စသည်စသည် အင်တာနက် စာမျက်နှာအားလုံးအတွက် မိမိဝင်ကြည့်တဲ့ဆိုက် အန္တရာယ်ရှိ/ မရှိ ကြိုတင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်။
၄င်း WOT Add-ons-လေး မိမိကွန်ပျူတာ Forefox-မှာ ထည့်ထားချင်ရင်....
၂။ အဲဒီစာမျက်နှာမှာ WOT Add-ons-လေး မထည့်ခင် သတင်းလေး ဖတ်ချင်ရင် ဖက်လိုက်ပါ
၃။ သဘောကျရင် အောက်မှာ ပြထားသလိုမျိုး [Add to Firefox]-ဆိုတဲ့ ခလုတ်ကလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၄။ WOT Add-ons-လေး အင်စတောလုပ် ဘောက်စ်လေးကျလာမယ်၊ Install-ကို ကလစ်ကာ တင်လိုက်ပါ။
၅။ အင်စတောပြီးသွားရင် မိမိဖွင့်ထားတဲ့ Firefox-ကို restart-လုပ်ဖို့ box-တခုကလာမယ်၊ restart-ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကစလ်ကာ မိမိဖွင့်ထားသော firefox=-ကို restart-လုပ်လိုက်ပါ။
က။ အစိမ်းရောင် အန္တရာယ်မရှိတဲ့ဆိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
ခ။ အ၀ါရောင် သံသယရှိတဲ့ဆိုက်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
ဂ။ အနီရောင် Virus-စတဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆိုက်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်...
Firefox-မှာ ပေါ်လာမည့် နေရာက အောက်ပါပုံများမှာ (၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာကပြသလို/ ဂူဂဲကနေ စာစသည်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ မိမိရှာလိုက်တဲ့ ဆိုက်လင့်ခ်လေးများရဲ့ ညာဘက်ဘေးကနေ WOT-ရဲ့ အရောင်လေးများနဲ့ ခွဲပြပါတယ်။)
ဒါက ဂူဂဲကနေ သီချင်းရိုတ်ရှာလို့ WOT-လေး အလုပ် လုပ်ပုံပါ....။ အီးမေးလ်မှာပေါ်ပုံတော့ မိမိတို့ မေးလ်ဝင်စစ်တဲ့အခါ တွေ့မှာပါ...။ သတိထားရှောင်လို့ရတဲ့ နည်းလေးပါ...။
Posted by Peace at 3:19 PM0comments Links to this post